हातमा कति शं’ख चक्र छ के फल दिन्छ ? जानी राखौ – Sandesh Munch
September 25, 2020 144
चक्र घुमेको हुन्छ यदि चक्र घुमेको भएपनि बिचमा थोप्लो छ , भने त्यस्तो चक्रले काम गर्दैन । र त्यस्तो चक्र गनिदैन । चक्रले काम गर्न नङमा चन्द्रमा बनेको औलामा चक्र पनि घुमेको छ र चोरी औलामा छ भने त्यसले पुर्ण फल दिन्छ ।
अन्य औलाम भएपनि राम्रो फल दिन्छ । भगवान श्री कृष्णले पनि चोर औंलामा चक्र धारण गरेका थिए । किनकी यो औलामा भउको चक्रले चतुर, कुसल बनाउन मद्धत गर्छ । ज्योतिष शास्त्र र समुन्द्र शास्त्र अनुसार हाम्रो हातमा हुने शंख र चक्रले यस्तो प्रतिफल दिन्छ ।
यदि तपाईको कुण्डलीमा पनि सबै ग्रह मिलेर बसेको छ र तपाईलाई कुनै ग्रहले पिरोलेको छैन भने सफलता पाउन सकिन्छ।
Prevकाम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनुपर्दैन
Nextफेला पर्यो जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर ! यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता
३ दिनमा ग्यारेन्टीका साथ अब यसरी पेट घटाउनुस – भिडियो सहित